Toon KupasÄ± Apk Download Ho an'ny Android  - Luso Gamer
Androany aho dia nitondra fampiharana lalao Cartoon Soccer ho an'ireo izay tia milalao lalao toy izany amin'ny finday. Izy io dia fampiharana malaza be izay fantatra amin'ny anarana hoe "Toon KupasÄ ± Apk" ?? ho an'ny Android.
Inona ilay Toon KupasÄ ±
Izy io dia iray amin'ny lalao baolina kitra hatsangana 2D vao novokarina herintaona lasa izay. Fa efa nohavaozina tamin'ny taona 2019 mba hanampiana mahafinaritra azy bebe kokoa. Azonao atao ny milalao azy io nefa tsy misy fiofanana satria izy tena tsotra sy mora. Ny zavatra tsara indrindra dia azonao atao ny misafidy ny toetranao manokana mba hilalao.
Misy taonina maro hampiasainao maimaimpoana. Maimaimpoana ny rindranasa ity raha misintona sy milalao fa misy koa ny ambinny sasany. Azonao atao ny mampiasa ireo vola karama ireo amin'ny alàlan'ny fividianana In-App. Betsaka ny rindrambaiko maro toy izany amin'ny sehatra apetraky ny antoko fahatelo.
Saingy hanana fikorontanana kely ianao amin'ity iray ity satria ny ankamaroan'izy ireo dia amin'ny sary 3D fa ity kosa dia amin'ny sary 2D. Na dia lalao 2D aza izy ity, matokia ahy fa manome fahafinaretana anao kokoa noho ny 3D rehetra Lalao Football fampiharana. Noho izany, nozaraiko ny Apk 2019 farany amin'ity lahatsoratra ity raha liana ianao dia azonao alaina eto.
anarana Toon KupasÄ ±
Developer Sariitatra Network EMEA
Anaran'ny fonosana com.turner.tooncup
Momba an'i Toon KupasÄ ±
Handeha hilalao baolina amin'ny firenena iray ianao satria miorina amin'ny firenena tena izy rehetra ireo ekipa.
Fa misy ny tsy fitovian-kevitra satria ny mpilalao dia tsy tena izy ireo fa an'ny sariitatra tena izy. Noho izany, afaka manana safidy hisafidy ny toetranao ankafizinao ianao mba hamoronana ekipa anao manokana. Azonao atao ny misafidy amin'ireto andian-dahatsoratra manaraka ireto toy ny.
Apple sy Onion
Toon KupasÄ ± Apk dia novolavolain'ny CARTOON Network EMEA. Nanangana tamin'ny fomba ofisialy ny fampiharana izy ireo tamin'ny 13 Jolay 2018 ho an'ny finday Android. Nanomboka teo dia efa herintaona mahery fa nahazo laza be dia be.
Efa namakivaky ny fidirana amina tapitrisa tapitrisa ao amin'ny Play Store izay fahombiazana lehibe amin'ity vanim-potoana fohy ity.
Ankoatra izany, misy doka saingy mahazo loka ianao amin'ny fijerena doka. Na izany aza, tsy hanelingelina ny lalao ataonao ireo doka ireo. Satria apetraka amin'ny fomba tsara izy ireo satria tsy mihetsika mandritra ny lalao.
Rehefa hanomboka Toon KupasÄ ± Apk ianao aorian'ny fametrahana dia hahazo menio misy safidy hafa ianao. Noho izany, ireto misy fomba filalaovana roa izay ahitana ny fifaninanana sy ny lalao haingana.
Azonao atao ny mifidy olona araka ny safidinao. Avy eo angatahina hisafidy firenena ianao. Aorian'ny fotoana hisafidiananao ny firenenao dia hahazo safidy ianao hisafidy ireo mpilalao, ekipa ary kapiteninao.
Eto ianao afaka manana karazany maro karazana safidy maimaimpoana fa vitsy amin'izy ireo no voaloa. Aorian'ny fisafidianana ireo zavatra ilaina rehetra, dia afaka miditra amin'ny lalao haingana na fifaninanana ianao, anjaranao aminao.
Rehefa hanomboka ny lalao dia hahita torolàlana vitsivitsy ianao raha vao nosokafanao ny fampiharana. Ireo torolàlana ireo dia hanampy anao ary hitari-dalana anao hanomboka ny dia.
Noho izany, ny lalao mihena ho lasa sarotra ho anao fa tany am-boalohany dia mora dia misy ary afaka misy mandresy eo amin'ny dingana voalohany.
Izany no fomba ahafahanao manomboka ny dianao ary azonao atao ny mijery ny fivoaran'ny ekipanao sy ny firenena ao amin'ny Leaderboard. Ao amin'ny Leaderboard dia hitanao ny hetsika ataonao isan'andro, isan-kerinandro sy isam-bolana.
Endri-javatra amin'ny Toon KupasÄ ± Apk
Betsaka ny endri-javatra azonao iaraha-manana amin'io lalao Android tsotra io. Izy io dia maivana lanja mavesatra ary mandany bateria kely kokoa ary koa ny habaka ao amin'ny fitaovanao. Raha te hahafantatra momba ny lafin-javatra bebe kokoa ianao dia jereo avy eo ny lisitra omena eto ambany.
Azonao atao ny milalao ao amin'ny maoderina lalao.
Izany dia maimaimpoana misintona sy milalao amin'ny finday Android finday.
Manana takelaka fidirana izay ahafahanao manara-maso ny fivoaranao ianao.
Manolotra anao ireo mpilalao avy amin'ny andian-tantara an-tsary malaza.
Raiso ny lalao ary mahazo loka mahavariana.
Rehefa mandresy lalao ianao dia mahazo vola madinika azonao ampiasaina hanala endri-javatra hafa.
Izany dia tena tsotra sy mora manomboka.
Izy io dia manana interface tsara izay miavaka fa be mpampiasa.
Ary tena betsaka koa ny hiala voly amin'ny ora fialan-tsasatra.
Ny dikan-teny farany amin'ny taona 2019 dia manolotra anao fanavaozana vaovao. Nizara ireo fanavaozana ireo sy fanovana nentin'ireo manampahefana tao amin'ny fampiharana aho. Ka araha, jerentsika ireo fanavaozana eto ambany eto.
Nampiana ny toetra vaovao.
Fifaninanana Toon Cup 2019.
Nohamafisina ny fifehezana ny mpilalao.
Nesorina ny hadisoana.
Manatsara ny fahaizanao baolina kitra ary mahazo loka maro be. Ity no fomba tsara indrindra hahazoana fahafinaretana amin'ny fotoana malalaka fa tsy mandany fotoana amin'ny asa tsy ilaina sy mahasalama ihany.
Matokia ahy fa ho tianao izany raha vao natomboka izany. Satria ny olona izay nilalao an'ity lalao ity dia mihevitra azy ho fampiharana mampiankin-doha.
Na izany aza, zavatra iray ihany no azonao fantarina rehefa mijoro vavolombelona irery ianao. Noho izany dia manoro hevitra anao aho mba hampidina ny tsimbadika farany an'ny Toon KupasÄ ± Apk ho an'ny Android.
Mba hampidinana ny fisie Apk an'ny fampiharana, dia tsy maintsy kitiho na tsindrio eo amin'ny bokotra download ianao ianao. Avy eo dia hanomboka hisintona mandeha ho azy.
Sokajy Games, Sports Tags Lalao Football, Toon KupasÄ ±, Toon KupasÄ ± Apk, Toon KupasÄ ± Lalao Post Fikarohana